Kwamaxesha atshisayo, abaninzi abantu baqala ukuba neengxaki emqaleni: idiliza, i-aches, okanye i-angina ihlasele umntu. Kodwa inyaniso kukuba oku kwenzekayo kungekhona nje ebusika okanye ekwindla, abaninzi abantu bahlushwa yi-angina nakwihlobo.
Ngokuqinisekileyo wonk 'ubani uyazi ukuba i-angina yintoni: ukushisa ngama-degrees angama-40, intlungu eqinileyo emqaleni, ukungakwazi ukuthetha igama elilodwa kunye nesilwanyana esendle.
U-Angina ukuvuvukala kweengqungquthela
U-Angina sisifo esithathelwanayo esinokubonakaliswa kwendawo yangaphakathi (intliziyo emlonyeni, ukubhubhisa, ubomvu) kunye neempawu eziqhelekileyo zokunganyamezelani (ukutshatyalaliswa, ukulahleka kwesidlo, isifo kunye nobuthathaka).
I-Classical angina kukuvuvukala kweengqungquthela, oko kukuthi, i-mandate palible. Nangona kunjalo, kwintamo yomntu (igama lesi-anatomiki) kukho iindlela ezine ezine-lymphoid - ziqukethe izicubu ze-lymphatic. Ezi zibandakanya: iiloni eziqhelekileyo (ezisezantsi emqaleni emlonyeni), iintlobo ze-adenoid (i-adenoids ephantsi kwempumlo) kunye ne-dvenubarnye tonsils (ama-lymphatic tissue ngasekuqaleni kwee-tubes auditor, yiyo "inqabileyo" ngokuvuvukala indlebe, kwindiza kunye nolwandle) .
Ukuqokelelwa kwezinto ezinamaqabunga e-lymphoid kwindonga yangemva ye-pharynx phantsi kwekhanda elimnyama, banokubonakala kweempumlo.
Zonke ezi zimilo zengculazi zifumaneka ngapha kweso sangqa kwaye zi "zilindi zomda" zentsholongwane.
Inkoliso engqongqo kwisakhiwo kunye nokuthakazelisa kukuba, kunjalo, iifoni - iitoni zomntu. Bamele ukuqokelelwa kweeseli ze-lymphatic ezisezantsi kumacala omgangatho we-pharynx phakathi kwee-arcs zesalathisi esithambileyo. Iifoni ziyinkimbinkimbi kakhulu kwisakhiwo. Ukuba ukhangelelene nabo, unokubona imingxuma. Le mibhobho yi-loble yeetoni ezinamafutha.
Ukuze ukwazi ukucinga isakhiwo sangaphakathi somoya, cinga umlambo weVolga phambi kwakho. Lo mlambo omude, onobuninzi beentlanzi, ugeleza kwiLwandle lweCaspian, kunye nendawo apho kuhamba khona kuthiwa i-dale (estuary) yalo mlambo. Ngoko ke, ukuba siqhathanisa, ke i-lacuna yi-delta, siyaqhathanisa i-ascus kunye neempendulo zeempendulo ezithinteleyo kwiitoni. I-crypt iguqulelwa ukusuka kwisiLatini "njengefihliweyo". I-crypts zifana neengcambu zemithi, ezikhula ngokujulile emhlabathini. Ephantse kulezi zikhuni zikhulayo i-lymphocytes-cells, ezijongene nomzimba womntu.
Kutheni abantu badinga kakhulu?
Zonke izicubu ze-lymphatic, apha zibandakanya i-palatinine i-mintelins, eyenzelwe ukulwa ne-microbes ezibangqongileyo. Siphefumula emoyeni, kodwa ngelo xesha, ii-microbes zingena emzimbeni wethu okanye sizibamba kunye nokutya. Iimpawu ze-microbes zihlala kwi-membrane ye-nasopharynx okanye i-pharynx. I-Lymphocytes zibona ngokukhawuleza i-microbes kwaye ziqala ukuvelisa i-molecule, i-antibodies, ekugqibeleni iyitshabalalise. Ngokuqhelekileyo, le yindlela elula kakhulu yokuphuhlisa imithi.
Ukukhuselwa komzimba kumzimba luyinkimbinkimbi yezinto ezinqamlekileyo kunye nezinye izinto ezinobunzima ezilwa ne-virus, i-microbes, kwaye zenze umntwana usakhula kunye nobuntwaneni. Ngoko ke, kubalulekile ukuba zonke izitho ze-lymphoid, ngakumbi umntwana.
Xa sikhula, okanye kunoko, xa kukho ukungaxilisi ngokwesondo, i-lymphoid tissue ibaluleke kakhulu kuthi, kuba ukhuselo oluchasene nezifo lusele lwakhiwe. I-Lymphocytes ekugqibeleni ihamba neetoni nezinye i-lymphoid accumulation, izicubu ezixhamlayo ziyavela kwindawo leyo, iifoni zibe zincinci kwaye ngamanye amaxesha zinyamalale. Le yindlela i-atrophylymphoid tissue eyenzeka ngayo.
Nangona kunjalo, yonke into esiye saxoxa ngayo, isebenza kuphela kubantu abanezikhuselo ezinamandla kunye nempilo. Kodwa wena uyazi ukuba imihla ngemihla abantu abaphilileyo bayaphila, ngenxa yezinto ezimbi eziphilayo, imikhwa emibi, ukutya okunempilo, unyango olungalunganga kunye noxinzelelo oluqhubekayo. Iinkqubo zokungena emzimbeni ziba buthathaka kwaye zihlala zihlala, kwaye ngenxa yoko, izifo zivela. Ngokwehla kwe-immunity, umntu uhlakulela i-angina kunye ne-tonsillitis engapheliyo.
Iimpawu kunye neengxaki
U-Angina uvame ukubonakala ngenxa yezinto ezithile ze-streptococcus. U-Angina ubonakaliswe i-otkomnebnyh tonsils kunye nobomvu. Yonke into incike kuhlobo lwe-tonsillitis kwiimononi, kunokuhlaselwa kuyo yonke i-toni, kwaye ibe kuphela kwi-lacunas. Okanye, ukutsho ukuba ifom kunye nobukho beplate libeka uhlobo lwe-angina.
Njengoko kukhankanywe ngaphambili, uphawu olugqithiseleyo lwendawo luyimbi yomqala, ngenxa yokuba umntu akanako ukugwinya umtya wakhe, uthetha, atye kwaye adle.
Ngokuqhelekileyo ngexesha lokugula okanye ngokukhawuleza emva kokuvelisa iingxaki ezinzulu: ukuvuvukala kwenhliziyo, umonakalo entliziyweni, ukutshatyalaliswa kweentsimbi zeentliziyo, ukuvuvukala kwamalungu. Ukuba ugqirha akuxelela ukuba kufuneka uhlale kwaye uphathwe ixesha elide, uxhala malunga nokuba ezi ngxaki zivela. Musa ukucinga ukuba uya kuyicela, landela iingcebiso zegqirha.
Kubalulekile ukuphathwa kakubi
Ekuqaleni, oko kufuneka uyenze ukuhlukanisa isigulane, khumbula ukuba intloko yomzimba iyadluliselwa ngamaconsi amanzi - ngokubanga, ukukhwehlela kunye nomkhuhlane.
Emva koko, kufuneka uqinisekise ukuphumla kwebhedlele oluqinileyo ngexesha lomkhuhlane, ngelixa kukho ukushisa komzimba okuphakamileyo, kwaye ke kwenye iveki yeveki kufuneka ube yimodi yasekhaya (ngaphandle kokuba, ngokuqinisekileyo, ubekwa esibhedlele).
Yaye yesithathu - kufuneka utywala iziphuzo ezifudumeleyo: itiye kunye nobusi, i-lemon kunye ne-raspberries, i-infusions kunye ne-tea yemithi (iSt John's wort, chamomile).
Ukuze ukwazi ukugwinya ngokuqhelekileyo, thatha i-painkillers ene-paracetamol-iTylenol, i-Efferalgan, iPanadol.
Kwaye into ebaluleke kakhulu yonyango lweyeza. Iziyobisi eziphambili kakhulu zichungechunge lwepenicillin kunye nama-macrolides. Kubalulekile ukuthatha i-antihistamines ukunciphisa i-edema yendawo kunye nokusebenza ngokugqithiseleyo komzimba.
Iingxaki ezinobungozi ebomini
I-tonsillitis engapheliyo ingakhokelela kwiinkxalabo ezinobungozi obunzima: ukuxhaswa kwiindawo ezinzulu, ukuxhaswa ngobunzulu bomlenze obusondeza emva kwe-palatine tonsil, kunye nokuqhuba phakathi kweentlungu zentanyeni kunye ne-slits zingena ngaphakathi kwintsimbi. Kufuneka kuthiwe ukuba le nto yokugqibela iyinto engavamile kakhulu. Nangona kunjalo, iingxaki ezisele zenzeka ngokuphindaphindiweyo, ngelixa umntu engakwazi ukuzibona ukuphuhliswa kwazo. Ngokukhawuleza emva kokuba i-angina okanye ngexesha layo kukho umlomo onqabile emqaleni, ngenxa yokuba ngokuqhelekileyo iingxaki zibonakaliso olulodwa. Kwakhona, iqondo lokushisa liyakhula, emva kweentsuku ezingama-3-4 isigulane asivuli umlomo wakhe, akunakwenzeka nokuba ufake i-teaspoonful ye-cereal emlonyeni wakhe.
Kwiimeko ezinjalo, kufuneka ucele i-ambulensi ngokukhawuleza ukuba usebenze esibhedlele.
Ngaba ndifuna ukususa iifoni kumntu omdala?
Ngamanye amaxesha isigulane nodokotela bajamelana nombuzo onzima kakhulu: "Ngaba ndifuna ukususa iifoni?"
Enyanisweni, ukuba umntu uhlakulela iingxaki: iintsilelo zentliziyo ziqala ukwenza, ukukhupha kwintliziyo kuvela entanyeni, i-arthritis okanye i-glomerulonephritis iqala, ngoko iifoni zifuneka zisuswe ngokungagcini nje kuphela ngabantu abadala, kodwa nabantwana.
Nangona kunjalo, kwenzeka ukuba umntu uye wabuyisela kwaye akukho zinkathazo, kodwa iimpumlo zibukeka ziphindaphindiwe ngezikhathi ezithile, umqala uqhuma, inkohlakalo engamnandi iphuma emlonyeni, isono esivame ukuhamba, i-otitis ne-pharyngitis zivela. Ugqirha kunye nesigulane siqala ukucinga, kufuneka basuse i-toni okanye cha.
Kule meko, kwakhona, kukho impawu ecacileyo: ukuba iikhosi ezimbalwa zonyango olulondolozo luye lwahluleka kwaye iimpawu azizange zinyamalale, ngoko kufuneka ususe ama-toni.
Ngaba ndifuna ukususa umntwana wam?
Lo ngumbuzo onzima kunzima: khumbula ukuba ekuqaleni sathetha malunga nokuba umntwana ufuna amathisipi e-lymphoid ukwenzela ukuba ukhuseleko lwangenako. Kule meko, isigulane sizama ukufikelela kumntwana ngaphambi kokuphelelwa ngumntwana ngokuncedisa unyango olulondolozayo. Ukunceda kakhulu iziyobisi ze-homeopathic. Kuhle ukuthetha nomntwana kunye ne-homeopath yengcali.
Ngokuqhelekileyo umntwana, le nto isifo "sininzi." Nangona kunjalo, ukuba kukho naziphi iingxaki kwiintlungu , intliziyo, amanxeba kunye nokugqithileyo, izifo ziyafunyanwa, zikhuphe ngokukhawuleza iifoni, cinga ngempilo yengane yakho.
Ukuba i-amygdala iye yanda ngokuphawulekayo, idlalwa rhoqo ngokuthi "ityala" iitoni.
I-ashberry ebomvu kumachiza omntu
Isicelo sokunyangwa kwemononi
I-cheese cottage cheese
Ukunika amandla kwiimeko ezixinzelelekileyo
Indlela yokukrazula i-cellulite emagqabini ekhaya
Kungcono ukukhumbula ngeempahla ezifundwayo
I-Flamenco - umdaniso wabasetyhini abangashadile
Mkhulukazi uSarah Jessica Parker
Sichitha ipaka lehenku ngendlela yokuqala - imidlalo ehlekisayo, iingcamango
Ukusebenza okulula okulula kwinqeni